भर्खरै बिहे भएको २ हप्तामै इन्द्रेणीका छत्र र काजलको चल्यो चर्काचर्की, भिडियो सहित ! – Online Khabar 24
भर्खरै बिहे भएको २ हप्तामै इन्द्रेणीका छत्र र काजलको चल्यो चर्काचर्की, भिडियो सहित !
भर्खरै बिहे भएको २ हप्तामै इन्द्रेणीका छत्र र काजलको चल्यो चर्काचर्की, भिडियो सहित, दर्सकबिन काजल जोशी र छत्र शाही को लाइभ दोहोरि कत्तिको मन पर्छ र बिबाहको सुभकामना दिने जत्तिले तल कमेन्ट box प्रतिक्रिया दिनुका साथै भिडियो अन्तिम सम्म हेरी भिडियो लाइक गरि शेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला।
लामो समयदेखी इन्द्रेणीका दुइ होनहार कलाकार छत्र साही र काजल जोसीको बिहेको चर्चाहरु पहिले देखिनै निकै चल्दै आइरहेको थियो तर बिहे हुन्छनै भनेर नत दुबैले भनेका थिय ।
नत हामि कसैलाई आधिकारीक रुपमा थाहा नै थियो । त्यसै टाइटल र केहि व्यक्तिहरुको कुरालाई लियर मात्र अनुमानितका आधारमा काजल जोशी र छात्र शाहीको बिहे भनेर अनेक कुराहरु आउदै गरेका देखेका थियौ ।
र सबैले रुचायका दोहोरीका जोडी भयर पनि होला धेरै दर्शक श्रोताहरुले दुबैलाई बिहे गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि दर्शकले दियको माया भनेर पनि सबैले बुझ्दै आइरहेका थिय तर अहिले भने सबैको मन मु’टुमा बस्न सफल जोडी छत्र शाही र काजल जोशी वै”वाहिक बन्धनमा बाधिएका छन् ।
उनीहरुलाई सुभकामना दिन गाउँका गाउँपालिका प्रमुख देखि वडा अध्यक्ष सम्म पुगेका थिय भने छत्र शाही सुदूरपश्चिममा जन्मिएका एक सफल गायक हुन् । इन्द्रेणीले एक समयमा छत्र शाहीको दोहोरीहरु धेरै राख्ने गरेको थियो त्यो समयमा धेरैजसो दोहोरीमा काजल देखिने गर्दथिन ।
सामान्य र एक सरल स्वभाब रहेका छत्र शाही लामो समय देखि यही क्षेत्रमा संघर्ष गरेर यो ठाउँ सम्म पुगेका गायक हुन् । भविष्यको कृष्ण कंडेल समेत भनेर उनलाई धेरैले सुभकामना दिने गर्दछन । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevयिनै हुन गिविना मगर जसले हातमा पैसा मुुठ्ठी पारेर गरिब दु:खी हरूलाई सहयोग गर्दै हिड्छिन !
nextराजेश हमालको खानपिन र जिवनशैलीले सबै चकित, हेर्नुहोस् के के खान्छन् ?